यस्ता छन् नेपालका उद्योगीहरु, लकडाउनमा जनतालाइ छाक टार्न गाह्रो, खाने तेलको रेट बढ्यो – Sanghiya Online
यस्ता छन् नेपालका उद्योगीहरु, लकडाउनमा जनतालाइ छाक टार्न गाह्रो, खाने तेलको रेट बढ्यो
Posted on : April 17, 2020 - No Comment
५ वैशाख, काठमाडौं । विभिन्न ब्राण्डका खानेतेलको मूल्य लिटरमा १० देखि २० रुपैयाँसम्म बढेको छ । खानेतेलको मूल्य लिटरमा १० देखि २० रुपैयाँसम्म बढेको खुद्रा विक्रेताहरूले बताएका छन् । उनीहरूको भनाइ अनुसार फ्याक्ट्रीबाटै मूल्य बढेर आएकोले मूल्य बढेको हो भने उद्योगहरूले ढुवानी खर्चमा भएको वृद्धिलाई कारण देखाएका छन् ।
एक लिटरको तेललाई खुद्रा व्यापारीले प्रतिलिटर १ सय ४५ रुपैयाँमा होलसेलबाट किनेर एक सय ५० रुपैयाँमा बेच्दै आएका थिए भने अहिले उक्त तेलको मूल्य एक लिटरमा १० देखि १५ रुपैयाँ बढेर आएको खुद्रा व्यापारीहरुले बताएका छन् ।
चैत्र १० सम्म एक सय ५० रुपैयाँमा बिक्री गरेको तेलको मूल्य अहिले एक सय ७० रुपैयाँ पर्छ । काठमाडौं लगायतका सहरमा तेल लगायत खाद्य वस्तुमा विनाकारण मूल्य बढेको भन्दै नेपाल चामल तेल दाल उद्योग संघले आपत्ति जनाएको छ ।
फोरम नेपालका उपाध्यक्ष युवराज कार्की ६० लाख खसका अभिभावक – खस एकता समाज
पेरिसडाँडाबाट २ वटा पेस्तोलसहित एक जनालाई पक्राउ, कसलाई सिध्याउन आएका थिए ?
राजपा र फोरमलाइ कांग्रेशको प्रस्ताब, महन्थ ठाकुरलाइ २ न. प्रदेशका मुख्यमन्त्री बनाऔ
विजय रामको हत्यारा जुनसुकै दर्जाको प्रहरी भएपनि कडा कार्यवाही हुन्छ ः मुख्य मन्त्री राउत ।
सरकार निमुखा जनताको भोखो पेटको पैदल यात्रामा तालि बजायो : शेर बहादुर देउवा